महिनावारीलाई हाउगुजी बनाउँदा….! | Jwala Sandesh
वि.सं. बिहिबार, माघ १५, २०७७ तदनुसार 27 January 2021
महिनावारीलाई हाउगुजी बनाउँदा….!
| प्रकाशित मितिः बुधबार, मंसिर २४, २०७७ ::: 374 पटक पढिएको |
म ७ वर्षको उमेरदेखि नै खाना पकाउने र घरको काम गर्न थालेको हुँ । किन भने मेरी आमा महिनावारी भएको अवधीमा घर बाहिर बस्नुहन्थ्यो । जसले गर्दा मैले खाना पकाउनु पर्दथ्यो । कहिले पकाउन सक्थे खान्थ्यौ, कहिले पकाउन सक्दैनथे सबैजना भोकै बस्नुपर्दथ्यो । आमा महिनावारी भएको समयमा म विद्यालयमा गएन भने साथीहरुले भन्थे ‘आज दुर्गाको आमा महिनावारी हुनुभयो क्या उ स्कुल आइन् ।’
१३ वर्षको उमेरमा म पहिलो पटक महिनावारी भए । पहिलो पटक महिनावारी हुँदा घरको धुरी देख्नु हुँदैन भनेर गोठमा १० दिन देखि लुकेर बसे । अर्को महिनावारी देखि घरको पिडीमा बस्न थाले । बाहिर बस्दा दहि दुध खान दिइदैनथ्यो । तर हामी भाईबहिनी मिलेर कहिले काही चारेरे पनि दहि दुध खाइदिन्थे । केहि हँुदैनथ्यो । म जब सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) दैलेखमा काम गर्न थाले । त्यसपछि फिल्डमा हिड्नुपर्दथ्यो । फिल्डमा हिड्दा एउटै ठाउँमा बस्न पाइदैनथ्यो । जसले गर्दा मैले म महिनावारी भए भनेर कसैलाई भन्दैनथेँ । अर्काको घरमा कहाँ बाहिर बस्ने भनेर भन्दैनथे । महिनावारी भएको बेलामा घरभित्रै बस्ने बानी परेपछी घरमा आउँदा पनि म घरभित्रै नै बस्दथे । आमाले सोध्दा म फिल्डमा नै महिनावारी भइसके भनेर भन्थे ।
एक दिनको कुरा हो म महिनावारी भएको थिए । फिल्डमा नै एक जना धामी म सँग बस्नको लागि आउनुभयो । मलाइ एकदमै डर लाग्यो । मैले सरलाई मेरो टाउको दुखेको छ म रेस्ट गर्छु भनेर सुते । तर मेरो दिमागमा धेरै कुराहरु खेलिरहे । सोँचे धामी काप्ने भए त एक सेकेन्ड छोइएपछि त कापीहान्नुपर्ने तर काप्नुभएन । हैन रहेछ क्या भन्ने लागेर भोलीपल्टसँगै एउटै गुन्द्रीमा बसेँ । तर केहि भएन । ए धामीलाई छुँदा पनि केहि हुँदो रहेनछ भन्ने लागेर मन अलि ढुक्क भयो ।
यसै गरि घरमा पनि खाना पकाउने देखि लिएर सवै ठाउँमा पुगे तर केहि भएन । यसै गरि अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस थियो । डाडीमाडी बजारमा कार्यक्रम सकेर साझ घरमा आईपुग्दा बाबुलाई सुताउदै थिए । त्यसै बेलामा गोठबाट बाख्रालाई बाघले समातेर लियो । मलाइ भोली पल्ट सासुले सोध्नुभयो की त महिनावारी त भएको थिएनस् ? आज घरमा बाघ आयो भनेर सोध्नुभयो तर मैले हैन थिएन भने । मनमा एक पटक डर त लाग्यो तर हैन यो त संयोग हुन सक्छ भन्ने लाग्यो । आफ्नो मन बुझाए । यसै गरि दशैको समयमा महिनावारी भए महिनावारी हँुदा दशैको लागि सबै खाना पकाए । टिका लगाए । सवै नातेदारकोमा टिका लगाउन पनि गए । घर नजिकैको एक जना महिला महिनावारी भएको कारणले दशैको टिका लगाउन पाइनन भन्ने सुने । मैले घरपरिवारहरुलाई सहजिकरण पनि गरे उनिहरुले घरमा बस्न दिन मानेनन् टिका पनि लगाइदिएनन् । तर म भने निरन्तर रुपमा घरमा बस्ने र सवै ठाउँमा जाने भएसकेपछि महिनावारी भएको बेला के बार्ने के नबार्ने भन्ने कुनै बन्देज नै भएन । घरमा पुजाआजा होस् या कुनै कार्य होस् म सबैमा सहभागी भए । मेरो ससुरा मृत्यु हुँदा म महिनावारी भएको थिएँ । तर सबै कर्ममा सहभागी भए । मलाइ महिनावारी भएको अवस्थामा अब बाहिर बस्नुपर्छ भन्ने कुनै यादै हुँदैन ।
यो एक सामाजिक रुपमा गलत अभ्यास रहेछ । जुन अन्धविश्वासको कारणले गर्दा हामीले गलत प्रथालाई अंगाली रहेकाछौं । त्यसैले मर्यादित महिनावारीको लागि आफैबाट बुरुवात गर्न जरुरी छ । यसलाई हाउगुजीको रुपमा लिँदा आज कति बालिकाको बिचैमा पढाइ छुटेकोछ । कति बलात्कारको शिकार हुनुपरेको छ । कति जिव जनावरको सिकार हुनु परेको छ । यस्तै हिंसा तथा दुव्र्यवहार हुँदा सहन नसकेको कारणले गर्दा कति महिला तथा किशोरीहरुले आत्महत्या गर्नुपरेको अवस्था छ । दिनहुँजसो हिंसा तथा दुव्र्यवहार सहनुपरेको छ । त्यसैले यस्ता समस्या नआउन भनेर सवै तह, तप्काबाट जिम्मेवार पूर्वक मर्यादित बनाउन प्रयास गर्रौ । लाज हुन्छ देवि देवताहरु रिसाउछन्, अनिष्ट हुन्छ, छुट्टै बवस्नुपर्दछ, खानामा विभेद गर्ने, भन्ने गलत मान्यतालाई आजैबाट तोडौं । सुरक्षित हऔँ । सफा बनौ । यो एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो । यसलाई रोक्न सकिदैन् । यसैले गर्दा सामाजिक रुपमा भएका गलत धारणाहरुलाई हटाउनुपर्दछ । यसलाई हाउगुजीको रुपमा डर त्रास र लाजको रुपमा नफैलाऔँ ।
लेखक सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल, दैलेखको सहायक कार्यक्रम निर्देशक हुन् ।
1 Comment on महिनावारीलाई हाउगुजी बनाउँदा….!
Sudha Gurung // December 9, 2020 at 2:49 pm // Reply
Ekdam sahi kura. Hardik dhanyabad Durga ji. Man ko haauguji hataema sabai kura thik huncha. Ani chhora ra chhori hurkaune hamro tarika ma pani Sanai bata sudha gare Matra chhora ra chhori bich ko bibhed anta hunecha.